Uyifaka njani iMarike ye-Android kwizixhobo ezintsha zeArchos Android | I-Androidsis
antocara | | Ezinye izixhobo, Tutorials
Ngale ntsasa siphawule kuwe ukuba umthwalo wokugqibela ka Izixhobo zeArchos Android beziqala ukufumana uhlaziyo lweFroyo. Ezi pilisi kunye nezixhobo zemultimedia azize nezicelo zikaGoogle ezifakwe kwangaphambili njengoko zingahambelani nemigangatho yokuvunywa kukaGoogle. Oku kuthetha ukuba abadibanisi izixhobo ezithile ezivunyiweyo nguGoogle ezenza ukuba zonke izicelo zabo zisebenze ngaphandle kwengxaki, kodwa ukuba zifakelwe zisebenza ngokugqibeleleyo.
Kucacile ukuba ukuhlela kwifayile ye- I-smartphone ye-Android okanye ithebhulethi evela kwizicelo zikaGoogle NjengoGmail, uGoogle Maps, uYouTube kunye neMakethi ye-Android, yenza ukuba esi sixhobo sifumane inani elipheleleyo. Ngokusebenzisa Imakethi ye-Android ngoku sinokufaka ezinye izicelo zikaGoogle ke kuyakufuneka kuphela ukufaka esi sicelo.
Ewe, nangona sisitsho, akukho sitishi se-Archos sinazo ezi zicelo zifakwe ngaphambili, siza kubona ukuba sizifaka njani, kulula kwaye zikhawuleza.
Kukho amanyathelo amabini ekufuneka uwathathe:
Khuphela le fayile
Khuphela kwi-SD, uyiqhube kwaye uqalise kwakhona ithebhulethi okanye i-terminal.
Unzima kakhulu ayisiyiyo, hayi? Ngapha koko, ngezantsi unayo ividiyo ngenkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Uyifaka njani iMarike ye-Android kwizixhobo ezintsha zeArchos Android
Ndiyakholelwa ukuba kunyaka olandelayo siza kuqala ukubona amandla eepilisi.
U-2011 uza kusizisela izinto ezininzi ezimangazayo kwaye siza kubona ukukhula kwabo. Ndilinde ukubona ukuba umxholo uza kuba nakho njani ukufumana enye nge-Android 🙂. I-Notion Ink Adam, ndicinga ukuba yiprojekthi enomdla, ukubona ukuba ivela njani.
Esi sithuba ngokuqinisekileyo sithathe isigqibo sokuba ndithenge iArchos 101. Ndibhukishe indawo esePhonehouse kuphela kwayo eyithengisayo iyathengiswa ngaphandle komhla wokufumaneka. Masibone ukuba iza kuza kungekudala kwaye ndiza kukuxelela. Ukubulisa
Ngale njikalanga abafana bendlu yefowuni bandinike ii-archos zam eziyi-101. Yima ngakwivenkile kwaye ubenze bajonge iStock, ngokuqinisekileyo banayo.
Mkhulu, ngolwesine ndizakupasa ukuba ngomso yipati. Enkosi ngolwazi Pucelo
Molweni kwii-archos zam ezintsha 101. Ndilele ebhedini. Into ipholile. Ikhibhodi kunye nescreen sihamba kakuhle nangaphandle kweplastiki ekhuselayo. 😉
Ndikhululekile ndiyathemba ukuba kungekudala bazothengisa iipilisi nge-android esele ilayishwe eMexico kuba ndingumntu ohlala eMexico apho ii-smartphones zibiza imali ephindwe kabini kunase-United States yenye indlela elungileyo yokuba ne-archos tablet ene-android ngexabiso ipod tuch
Kutshanje kufakwe kwiArchos 101. Isebenza ngokugqibeleleyo.
Pucelo, uyazibona iividiyo zeYouTube kwiiarchos 101 zakho ??. Enkosi.
Ngale sicelo, akunakwenzeka ukuba ujonge iYouTube ngokuthe ngqo. Andazi ngqo ukuba kutheni kodwa ukuze uyibone unokwenza izinto ezi-2:
Sebenzisa enye eyona tyhubhu yesicelo
Susa ukupapashwa kwe-youtube kwi-las bravas kunye nomhloli wefayile, hit the market, kwaye uphinde ufake i-youtube ukusuka apho.
Okokugqibela yinto endiyenzileyo, ndijonga indlela ekubizwa ngayo isicelo kwaye sikwisiphi isikhombisi.
Ndiyathemba ukuba ndiye ndanceda
Enkosi ukuba ndiza kwenza ubuncinci kwaye ndinokufaka umbulelo kuGoogle kwimakethi yakho kwaye ukusuka apho ukhuphele i-flash player, ayintle njengekhompyuter yasekhaya kodwa kukho into esele iyisebenzele enye into iarchos yam xa ndidikiwe , enkosi pucelo.
Hee, ukwazile ukuyisusa kanjani i-youtube? Yonke into eyenziwayo ilungile !!
Ukuba imakethi ifakiwe, isiqinisekiso sendlu silahlekile? Njengoko ubona, ndilahlekile kancinane kule micimbi. Enkosi
Ndiphinda ukuthandabuza kwam, ndingenisile nge-imeyile yam. Ukuba ndifaka imarike ndiphulukana newaranti yendlu, ndinengxaki xa ndihambisa ii icon ezifakiweyo
Ngaba ingaba kwi-archos 7 tablet?
Ngaba i-Android 2.1 okanye i-2.2 ingafakwa kwi-archos 7 tablet?
Bonjour uphawule ça va? Ndiyamthanda
Enkosi kakhulu ngolwazi, ndinee-archos 7 zetheyibhile ye-intanethi kwaye lubisi
Ndinee-archos 10.1, kwaye andiziboni iividiyo ze-youtube, indicela ukuba ndihlaziye i-Adobe, ndizama ukukhuphela i-Adobe kodwa kubonakala ngathi ayinakwenzeka, yintoni ekufuneka yenziwe kule meko? Enkosi ngoncedo lwakho
Xa ndifaka inkqubo xa ndifumana ukhetho "Faka usetyenziso lukaGoogle" ndifumana lo myalezo ulandelayo:
Ayikwazi ukufaka usetyenziso lukaGoogle. Le nkqubo isebenza kuphela kwi-froyo.
Ndingenza ntoni ukuyilungisa?
Kulungile, ndinengxaki efanayo, sowuyisombulule?
Nam sele ndigqibile ukusombulula ???
Molo, molo emva kwemini, ndingathanda ukubona ukuba ungandazisa malunga ne-archos tablet harmonona 7 ene-Android 2.2 k izicelo ezinokuhambelana naye kunye ne-ktal yokuxhuma kwi-intanethi x wifi Ndifuna ukuqiniseka kakuhle kwaye sisipho sam intombi endithandana nayo kwaye andifuni ukutshitshisa okanye ukuchitha imali yam kuba andinakukwazi ukuyifumana, ndiyabonga nonke, ndiyathemba iimpendulo ezikhawulezayo kwi-imeyile yam, mbulela kubo bonke
molo ngokuhlwa okuhle, ungandixelela ukuba ndingayifaka njani i-Android 2.2 kwi-archos 7 tablet? Ininzi into yokuba andinalwazi.Abantu abaninzi, kuba ndiyifaka kwinkqubo kwi-sdcard, ndicime, ndivule kwaye akukho nto.Ndiyabulela kuni nonke, niyabulisa.
Molo, ndizama ukufaka usetyenziso lukaGoogle kwaye ndifumana umyalezo olandelayo: Awunakho ukufaka usetyenziso lukaGoogle. Le nkqubo isebenza kuphela kwi-eclair. Ngaba ukhona umntu onokundinceda ukuyifaka? Enkosi kakhulu
Phendula u Susohappy
Mholweni. ingafakwa kwi-aronova 7 tablet?
Molweni, bafana abalungileyo, ndine-Archos 7ob ereader kwaye xa ndibeka ifayile kwaye ndibetha ikhadi le-SD ndifumana le mpazamo ilandelayo: usetyenziso lweefayile (com.android.Rock process) luphazamisekile ngokungalindelekanga.
Ndingayisombulula njani le ngxaki?
Phendula ku Rafa_tope
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingakwazi na ukukhuphela imidlalo kwincwadi ye-archos 70b okanye ukuba kufuneka ndikhuphele inkqubo ukuze ndikwazi ukukhuphela imidlalo kuba xa ndizama ukukhuphela: umzekelo, i-solitaire, indixelela ukuba le fowuni qaphela okanye ayivumeli ukukhuphela nceda undincede, ndiyabulisa yam
Ola, into efanayo iyenzeka kum njengoAlex, yintoni enokwenziwa?
Ndidinga ifayile ukufaka usetyenziso lukaGoogle, enkosi.
S Bacan sitsho
kodwa xa ndisusa ikhadi le-sd ukuba ndingafaka into eyenzekayo kum ndine-android froyo
Phendula S Bacan
Pilarliebana 87 sitsho
molo ndine-arnova archos 7 g3 kwaye andinakho ukufaka usetyenziso lweemarike ze-android, ndiyikhuphele usetyenziso, ndiyifaka kwikhadi le-sd, ukuqala kwakhona kwaye xa isicelo sivuliwe kwakhona indixelela ukuba ikwi tablet kwaye andinakuqhubeka nenkqubo. NCEDA nceda ndifuna ukukhuphela usetyenziso olufanelekileyo !!!
Ukubulisa akuzange kusebenze nesicelo.